OTU ESI EBUFE EGO SI SBERBANK RUE KIWI - QIWI - 2019
Otu esi ebufe ego si Sberbank ruo QIWI
Mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-arụ ọrụ na tebụl, ịkwesịrị ịtinye ederede na cell, ma ọ bụghị dị ka ọ na-arụ, dị ka ọ bụ mgbe ahụ. Ohere a na-enye ihe omume Excel. Mana ọ bụghị onye ọrụ ọ bụla maara otú e si eji ya. Ka anyị hụ ụzọ Excel nwere ike isi dee ederede ahụ.
Ihe omumu: Esi dee ederede na Microsoft Word
Ide ihe ndekọ ederede
A na-edozi ajụjụ nke ederede ederede na Excel site n'enyemaka nke ngwaọrụ nhazi. Ma n'agbanyeghị nke a, e nwere ụzọ dịgasị iche iche iji tinye ya n'ọrụ.
Nzọụkwụ 1: nhazi site na menu ndokwa
Ọtụtụ mgbe, ndị ọkachamara na-ahọrọ ịgụnye ederede ederede site na itinye nhazi na windo. "Hazie mkpụrụ ndụ"ebe ị nwere ike ịgafe na ndokwa menu.
Anyị jiri aka nri pịa cell ahụ nwere ndekọ ahụ, nke anyị ga-asụgharị ka ọ bụrụ ebe a na-ahụ anya. Na nchịkọta nhọrọ na-emeghe, họrọ ihe ahụ "Hazie mkpụrụ ndụ".
Ohere meghere "Hazie mkpụrụ ndụ". Gaa taabụ "Ndozi". Na akụkụ aka nri nke windo oghe nwere ngọngọ nke ntọala "Ntuziaka". N'ọhịa "Ogo" njirimara ndabara bụ "0". Nke a pụtara ntụgharị ederede nke ederede n'ime mkpụrụ ndụ. Anyị na-ebugharị na mpaghara a site na iji keyboard uru "90".
I nwekwara ike ime ihe dị iche. Na "Text" ngọngọ e nwere okwu "Ndenye". Pịa ya, jigide bọtịnụ òké aka ekpe ma dọrọ ya ruo mgbe okwu ahụ dị na nkwụsị. Mgbe ahụ hapụ bọtịnụ òké.
N'otu oge na windo ntọala ndị a kọwara n'elu, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Dika ị nwere ike ịhụ, mgbe omume ndị a gasịrị, ntinye nke cell ahụ ahọrọ ahọrọ dị ka oghere.
Usoro 2: arụ ọrụ teepu
Ọbụna mfe iji ederede ederede bụ iji bọtịnụ pụrụ iche na ederede ahụ, nke ọtụtụ ndị ọkachamara maara ma ọ bụ ihe dịkarịrị ala karịa window formatting.
Họrọ cell ma ọ bụ nso ebe anyị na-eme atụmatụ itinye data.
Gaa taabụ "Home", ma ọ bụrụ na anyị nọ na taabụ ọzọ. Na teepu na ngọngọ nke ngwaọrụ "Ndozi" pịa bọtịnụ ahụ "Ntuziaka". Na ndepụta nke mepee, họrọ ihe ahụ "Gbanwee ederede".
Mgbe omume ndị a gasịrị, a ga-egosipụta ederede na ọnụọgụ ma ọ bụ ọnụọgụ dị na ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro a dị mfe karịa nke gara aga, ma, ọfọn, eji obere oge. Onye o choro ime usoro a site na window formatting, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịga na taabụ kwekọrọ na teepu. Maka nke a, ịnọ na tab "Home", dị nnọọ pịa akara ngosi dịka ụdị akụ na-abaghị uru, nke dị na akuku aka nri nke otu ngwaọrụ "Ndozi".
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo ga-emeghe. "Hazie mkpụrụ ndụ" na ihe omume ndị ọzọ ọ bụla kwesịrị ịbụ otu ihe ahụ na mbụ. Nke ahụ bụ, ọ ga-adị mkpa iji aka na ngwaọrụ rụọ ọrụ "Ntuziaka" na taabụ "Ndozi".
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ederede ederede na ederede ka ọ bụrụ ọnọdụ kwesịrị ekwesị, a na-eme nke a site na iji bọtịnụ ahụ "Ntuziaka" na teepu. Pịa na bọtịnụ a na ndepụta nke gosipụtara, họrọ ihe ahụ Text Vertical.
Mgbe omume ndị a gasịrị, ederede ga-ewere ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, e nwere ụzọ abụọ kachasị mma isi gbanwee usoro ederede: site na windo "Hazie mkpụrụ ndụ" na site na bọtịnụ ahụ "Ndozi" na teepu. Ọzọkwa, ụzọ abụọ ndị a na-eji otu usoro ịhazi usoro. Tụkwasị na nke a, ị kwesịrị ịmara na enwere nhọrọ abụọ maka ndokwa a na-ahụ anya nke ihe ndị dị na cell: ndokwa ederede nke akwụkwọ ozi na ntinye yiri nke okwu n'ozuzu ya. Na ikpe ikpe a, edere akwụkwọ ozi ahụ n'ọnọdụ ha, ma na kọlụm.
https://termotools.com ig.termotools.com © Qiwi 2019